Uyiguqula njani ifoto ibe ngumzobo nge Photoshop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UManuel Ramirez | | Idizayini yeMifanekiso, Tutorials
Adobe Photoshop inamathuba amaninzi kwaye iyasivumela ukuba senze zonke iintlobo zohlengahlengiso kunye nohlengahlengiso kuzo zombini iifoto kunye noyilo esizenzayo lwethu kwaye emva koko sifuna ukuthengisa. Sesinye sezixhobo ezikhoyo ngoku kwaye sisebenzele ukutshintsha umhlaba woyilo kunye nokufota ukuze ufumane ngeendaba ezimangazayo njengale.
Namhlanje siza kukufundisa indlela yokuguqula ifoto ibe ngumzobo ngeAdobe Photoshop. Siza kusebenzisa amacebo okucoca ahlukileyo kwigalari nakwizandla zethu ukuyinika eyona nto iyiyo, ukuze kubonakale ngathi besikunye nepensile kunye nomzobo wokucima loo foto yosapho lwethu okanye abahlobo.
Ngaphambi kokuqala isifundo, unga khonza kwividiyo esiyipapashe kwisitishi sethu ye-Creativos ekwi-Intanethi ukulandela amanyathelo njengoko anjalo kwaye kulula ngakumbi kunalapha.
Amanyathelo okuguqula ifoto ukuzoba ngeFotohop
Sicebisa ukuba usebenzise lo mfanekiso ungezantsi ukwenza isifundo:
Vula umfanekiso kwi-Photoshop, masenze maleko ophindiweyo nolawulo + J.
Nje ukuba uluhlu oluphindwe kabini lukhethwe, siya ku "Yenza umaleko omtsha wokugcwalisa okanye wokuhlengahlengisa" kulawulo lwewindows.
Umfanekiso uya kuba mnyama kwaye umhlophe.
Ngoku sisebenzisa imowudi yokudibanisa "Umbala weDodge" kumaleko aphindwe kabini okanye umaleko 1.
Iithagethi ziya kubonakala njengoko sishiye ukuqhubela phambili.
Sitshintsha imibala ngokulawula + mna kwaye umfanekiso uya kubonakala ungenanto kwaphela.
Ngoku lixesha lokwenza iLayer 1 into eyi-Smart ngokunqakraza kwilayini kwaye ukhethe olo khetho.
Senza oku ukuze sikwazi ukwenza utshintsho kwisihluzi kwaye ngenxa yoko ube nakho ukuyiguqula ukuba umfanekiso wethu uyayidinga ukuvelisa umphumo omkhulu wepensile.
Nangona ungenayo inketho yokuguqula into efanelekileyo, ngeli nyathelo ungaqhubeka, kuba kufuneka siye kwiifilitha> Blur> Blur Gaussian.
Kulo Ifestile yokufiphala yeGaussian siyiguqula irediyasi ngeepikseli ezi-2,7. Ngale ndlela siya kuba nomzobo kwaye ubuso buya kuba nemilo efanelekileyo. Ukuba besiphambi komnye umfanekiso singatshintsha irediyo ukuze ilingane ngcono, kuba le sinayo ikhanya ngokuqaqambileyo.
Sinika KULUNGILE ukuyisebenzisa.
Siya ku phinda umfanekiso ongasemva kwakhona ngolawulo + J kwaye siyiphakamisela phezulu kumaleko.
Siya ku umbala we-desaturate umbala ngolawulo + Shift + U.
Ngoku siza kusebenzisa esinye isihluzo kwi-Filter> Igalari yokuCoca> Stylize> Imida ekhanyayo.
Uluvo apha kukuba siyakubona ulwandlalo ludwetshiwe, ke sisebenzisa i-Edge Width ukuya kwi-1, ukuKhanya ku-5, kunye nokuGungqa ku-4.
Sinika KULUNGILE, kwaye ngoku chukumisa ukuguqula imibala ngoLawulo + mna.
Lixesha lokuba usebenzise imo yokudibanisa ephindaphindwayo. Siza kwenza iipikseli ezimhlophe zingabonakali kwaye ezimnyama zibonakale.
Umbono ngoku kukunika i umzobo welo thala lamalahle yezithunzi. Siphinda-phinda umaleko ongasemva ngoLawulo + J kwaye siluse phezulu kumaleko.
Silahla umfanekiso ngokuLawula + Shift + U.
Kwaye siya ku Icebo lokucoca> Igalari yokuhluza> Sketch> Amalahle. Sisebenzisa u-1 kububanzi bamalahle, u-4 kwiinkcukacha kunye nama-49 ekukhanyeni nasethunzini lokulinganisa.
Ngalo lonke ixesha siguqula izihluzo ziya kuhlala zixhomekeke kwifoto esiyisebenzisayo. Ayisiyonto ilungisiweyo kwaye nento oza kuyidlala.
Lixesha lokuba usebenzise i imo yokudibanisa "Phinda" kumaleko esiwasebenzisileyo amalahle.
Ngoku, ukuba sinetafile yeWacom ebhetele yokuzoba. Kodwa akuyomfuneko ukusukela ngempuku, kwaye nangona singenabuchule bokuzoba, sinokusebenzisa izithunzi xa sizoba isihlwele yemigca.
Sikhetha ibrashi nge-B kwaye sibeka ubungakanani beepikseli ezingama-31 ukuze iphantse igubungele iliso.
Siyaqonda ukuba xa ufaka amalahle iris ayibonakali kakuhle, ke siya kusebenzisa ibrashi ukuyikhupha.
Senza umaleko wemaski kwiqhosha elisezantsi kweewindows.
Siyacinezela X isitshixo sokutshintsha umbala ongaphambili ngombala omnyama ukuba ibingenanto okanye enye. Ngale ndlela, xa sipeyinta mnyama, iipikseli ezikhethiweyo ziya kufihlwa.
Sipeyinta ngombala omnyama kwaye siya kuvelisa isiphumo esifunayo. Uyawubona umahluko kunye nomfanekiso wangaphambili emehlweni:
Singaqhubeka nokupeyinta ukukhanyisa ezo ndawo zimnyama. Chukumisa de ufumane umzobo onqwenelekayo ngaphandle kokulibala ukusebenzisa ulawulo + ngoonobumba abakhulu + Z ukucima ukuba awuyithandi into ebangelwe.
Ngoku lixesha lokwenza ibrashi incinci ngeepikseli ezi-1 okanye ezi-2.
sidala Uluhlu olutsha noLawulo + Shift + N.
Sehlise ukuhamba kuye kwi-56% ukwenza i-grey emnyama kwaye ijonge umzobo wepensile.
Sandisa umfanekiso kwaye siqala ukuzoba kumfanekiso ukuvelisa izithunzi zepensile.
Ngumcimbi wokuchitha ixesha ukusebenzisa ezo ndlela kunye Sebenzisa ezimnyama ukwenza ukuba kubonakale ngathi zitsalwa ngesandla, Njengakumzekelo womfanekiso apho sibonisa ngokuthe ngqo indlela eyenziwa ngayo:
Obo buchule unako sebenzisa ezinweleni, emzimbeni nakwizikrweqe njengoko kubonwe kule ngaphambili / emva komfanekiso:
Zobe yonke ifoto, senza umaleko omtsha wokugcwalisa ezimhlophe:
Senza ukuba uluhlu olutsha lwenziwe.
Siya kumajelo kwiwindow yokugcina kwaye ukhethe nayiphi na kuzo. Luhlaza okwesibhakabhaka ngokufanayo.
Siyirhuqa kwi icon ebekwe ezantsi ukwenza itshaneli entsha.
Lo sikhetha kwaye siguqule imibala ngoLawulo + mna.
Umbono ngoku kukudala ukhetho lweepekseli zokukhanya emfanekisweni. Silawula + cofa kwi-thumbnail ye "Ikopi eBlue".
Siya kwisitya sendlela kwaye sisebenzise ugcino lokugcwalisa.
sidala umbala omtsha oqinileyo wokugcwalisa umaleko kwaye ngokukhetha umbala sinokubona ukuba isiphumo se-sepia siveliswa njani ukuba sisebenzisa ithoni eorenji okanye emdaka okanye nokuba sihlaza okwesibhakabhaka.
Kule meko siza kusebenzisa enye kufutshane nomnyama neblowu.
Cofa Kulungile kwaye siya kuba nomfanekiso wethu ogqityiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Uyiguqula njani ifoto ibe ngumzobo nge-Photoshop
Ndiyenza njani ukuba igcine umbala wokuqala? Oko kukuthi, ijongeka njengomzobo kodwa hayi ngombala omnyama nomhlophe? Enkosi